नेपाल आज | सरकार परिवर्तनको खेल अस्थिरता ल्याउने षडयन्त्र (भिडियोसहित)
सरकार परिवर्तनको खेल अस्थिरता ल्याउने षडयन्त्र (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि शिक्षण अस्पतालमा आराम गरिरहेकाबेला केही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भए :
क ) राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेट
ख ) राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र नेकपा वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच भेट
ग ) खुमलटारमा प्रचण्ड, बामदेव गौतम र माधव नेपालबीच भेट
घ ) प्रतिनिधिसभामा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने प्रस्ताव अन्तिम समयमा स्थगित
यी बाहेक पर्दा पछाडीका कथा र संवाद पनि अनेक छन् । प्रधानमन्त्री शिक्षण अस्पतालमै रहेकाबेला पनि उनको समूह थप राजनीतिक योजनामा सक्रिय थियो ।
सारांशमा सत्तारुढ नेकपा भित्रै एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल अहिले पनि चलिरहेको छ । अझ प्रधानमन्त्री बालुवाटार सरेकै दिनबाट यो खेलले अझ तीव्रता पाएको छ । कानुन व्यवसायी एवम राप्रपाका नेता डम्मर शिवाकोटीका अनुसार नेकपा भित्र अध्यक्ष प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र बामदेव गौतमको समूहले अहिलेको सरकार ढालेर नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको खाका पनि तयार गरिसकेका छन् । उनीहरु छिटो भन्दा छिटो यो सरकार ढाल्ने तयारीमा छन् ।
यता, प्रधानमन्त्री ओलीको समूह यी सबै खेलबाट अनभिज्ञ छैन । प्रधानमन्त्री आफूविरुद्ध षडयन्त्र गर्नेहरुलाई तह लगाएरै छोड्ने मनस्थितिमा छन् । अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवाडको निरन्तरता त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।
शिवाकोटीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु निकास होइन । यसले थप अस्थिरता ल्याउँछ । अहिले नेकपाको दुवै समूहभित्र विदेशीको चरम चलखेल छ । मुख्यतः भारत, चीन र अमेरिकाको चेपुवामा नेकपा परेको छ । विदेशी शक्तिले ओली र प्रचण्ड समूहलाई आ–आफनो स्वार्थ अनुसार खेलाइरहेको छ । यसले नेकपा फुट्ने खतरा पनि उत्पन्न भएको छ ।
परिवर्तन नै गर्ने हो भने प्रणाली फेर्नुपर्छ, व्यवस्था फेर्नुपर्छ । संवैधानिक राजसंस्था (संसद् मातहत ), हिन्दु राष्ट्र र स्थानीय स्वायत्त शासन नै देशका लागि हीतकर छ । केन्द्र र स्थानीय सरकार भए पुग्छ । प्रदेश सरकारको खारेजी तत्काल गर्नु अनिवार्य छ ।
जहाँसम्म अहिलेको सरकारको सक्षमताको कुरा छ, त्यसका लागि तत्काल प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र भूमी सुधार मन्त्री पद्यमा अर्याललाई हटाउन जरुरी छ । अर्थमन्त्रीका कारण मुलुकको आर्थिक व्यवस्था डामाडोल भएको देखिदादेखिदै पनि पुनः अर्थमन्त्रीमै निरन्तता दिनु दुर्भाग्य हो ।
भूमी सुधार मन्त्रीले त भू सेवा केन्द्रको स्टेशन नै भारतको गोवामा राखेर अपराध गरेकी छन् । विश्व बैंकबाट ऋण लिएर केन्द्र भारतमा राख्नु कतिको उचित कुरा हो ?
प्रधानमन्त्रीले आफनो पार्टीबाट अन्य देशभक्त नेताहरुलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ । जनविरोधी र विवादित मन्त्रीलाई हटाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।